बजेटका लक्ष्य पूरा हुन्छन्, शंका नगर्नुहाेस् : अर्थमन्त्री | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
जेठ १७, २०७५ बिहिबार ७:४:२८ | रासस
सरकारले संघीय संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटका लक्ष्य तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने दावी गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कृषि तथा सेवा क्षेत्रमा हुने विस्तार एवं वृद्धिले आगामी आवका लागि लिइएको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरसहितका अन्य लक्ष्य पूरा हुने दावी गर्नुभयो ।
त्यस्तै, सेवा क्षेत्रमा १२ प्रतिशतले विस्तार हुने र बजेटको लक्ष्य पूरा हुने दाबी पनि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले गर्नुभयो ।
सरकारले नियमन गर्ने कार्यमा कडाइ गर्ने प्रष्ट पार्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो, “राज्यको मार्ग दर्शनभन्दा बाहिर कोही पनि जान पाउँदैन । राज्यले व्यवसाय गर्ने अवसर सबैलाई दिन्छ तर उनीहरूले पालना गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गराइन्छ । राज्यले जनताका पक्षमा गर्न खोजेका कुरालाई अनादर गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन ।”
रोजगारीसहित जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा र वित्तीय पहुँचलाई बजेटले ध्यान दिएको दावी गर्दै उहाँले आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणमा बजेटको विशेष जोड रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्योगलाई रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गरिने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउँछौँ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नेछौँ ।”
प्रतिस्पर्धात्मक तवरले ठूला आयोजनालाई अगाडि बढाउने बताउँदै डा. खतिवडाले भन्नुभयो, “लगानीकर्तालाई ठूला आयोजनामा लगानी गर्न आह्वान गरेका छौँ ।”
बजेट कार्यान्वयनमा सबै निकायको सहयोग अपेक्षित रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । रासस